Indliso – iAfrika
Idliso lingangena kumuntu ngezindlela ezimbili, eyokuqala ukufakelwa ekudleni kanye nokulidla ephusheni.
Uma uphupha udla noma uphuza, usuke ufakwa idliso. Uma ukudlile ukudla ephusheni lokho kusho ukuthi idliso lingenile ngaphakathi. Uma kuwukuthi uvukile ngaphambi kokuthi udle , lokho kusho ukuthi alingenanga idliso.
Ngokwesintu uma udliswa kusuke kukhona okuthakathayo, lapho ke kumele udle amafutha noma inyama yengwenya ukubulala idliso ngaphakathi ngaphambi kokuthi likugulise. Kokunye ke idliso lelo liyakhishwa ngomuthi wokuphalaza nokho lokhu nakho kuInobungozi ngoba ungagcina udlula emhlabeni usalikhipha uma kuwukuthi beselakhele kakhulu ngaphakathi kuwe.
1 thought on “Indliso”
Idliso lisebenza emva kweskth esingakanani?